«Masters 2016» : mpilalao «élite» no hakana ny ekipam-pirenena | NewsMada
«Masters 2016» : mpilalao «élite» no hakana ny ekipam-pirenena
Hanatrika ny “Masters 2016”, hatao any Frantsa, manomboka ny volana jona ho avy izao, i Madagasikara. Takin’ny Quaterback, mpanohana ny fifaninanana, amin’ity, fa tsy maintsy mpilalao “elite”, salama ara-batana ary afaka mipetraka any Frantsa, mandritra ny telo volana, sy vonona hanaraka ny lalàna, hapetraky ny mpikarakara.
Noho izany, nanolotra ireo mpilalao mahafeno ireo fepetra ireo, tamin’ny federasiona ny tale teknika nasionaly ka mpilalao 15 aloha, hatreto, ny hifantenana izany. Anisan’ireny i Bôlô, tompondaka eran-tany amin’ny “tir de precision 2016”, sokajy “junior”, Toutoune, Jean, Taratra, Ram’s, Mamy Ronaldinho, Carlos, Tiana Tonnerre, Faly Jex, Tita, Nanou, Radoko, Hery Morondava ary Mamy Mainty.
Nambaran’Andriambelosoa Naina, filoha lefitry ny federasiona, fa azo ampiana ireo anarana ireo, raha misy mpilalao mahafeno ireo fepetra ireo. Ny faran’ny volana marsa ho avy izao ny fandefasana ny anaran’ireo mpilalao 4 voatazona, any Frantsa.
Amin’ny 9 avrily ny fotoana
Ankoatra izay, ho fantatra ny 9 avrily izao izay hampiantrano ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany “Mondial”, na i Madagasikara na Malezia. Nomarihin’ny filoha lefitry ny federasiona fa raha lasan’ny Malagasy izany, hisy ny fivorimabe tsy ara-potoana hataon’ny federasiona. Ekipam-pirenena no hiatrika izany ka hisy fifaninanana «inter-ligue», hatao ny 23 avrily ho avy izao, izay hamoaka mpilalao 15. Ny 12 amin’izy ireo ihany anefa no horaisina. Hisy mpanazatra 11, hanara-maso sy hanome naoty azy ireo.
Nasiany teny koa ny filazan’ireo mpilalao sasany, mahakasika ny “Masters 2015”. Tsotra ny valin-teniny fa tsy nahazo tatitra ny amin’izany ny federasiona. Mety ho tetika hanakorontanana, mba tsy hahazoan’i Madagasikara mampiantrano ny “Mondial” izany ary koa olona efa miomana ny hofidina.